Basa Rokuchikoro Rakandiwandira—Ndibatsirei! | Vari Kuyaruka
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kikamba Kikongo Kinyarwanda Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Tsvaka nzvimbo yauchaverengera. Inofanira kunge iri nzvimbo isina zvinovhiringidza. Shandisa tafura kana ichiwanika. TV ngaidzimwe.
Nguva yakafanana nokumhanya kwebhiza—unofanira kudzidzira kugona kuishandisa
Ita zvinhu zvinokosha pakutanga. Sezvo basa rako rechikoro richikosha, zviudze kuti zvimwe zvinhu uchazozviita kana wapedza kuita basa rechikoro.
Rega kuverengera kuita zvinhu. Iva nepurogiramu yokuti uchaita nguvai basa rako rokuchikoro uye kana nguva yacho yasvika chibva waita.
Ronga zvinhu zvako. Ronga kuti ndezvipi zvauchatanga kuita, uye zvauchazoita pashure pokunge wapedza zvokutanga. Nyora zvinhu zvacho pabepa, uye chimwe nechimwe chipe nguva yaunozofanira kupedza uchichiita. Kanzura zvaunenge wapedza.
Iva nenguva yokuzorora. Kana ukaona kuti pfungwa dzako dzava kumbeya-mbeya, imboti zororei. Asi haikona kuzopedza gore usati wadzokera pabasa rako.
Iva nechivimbo nezvauri. Chaunofanira kuyeuka ndechokuti, musiyano uri pakati pemwana anobudirira neasingabudiriri haisi nyaya yokuti munhu anoziva zvakadini asi kuti anoshanda nesimba zvakadini. (Zvirevo 10:4) Unogona kubudirira muzvidzidzo zvako. Shanda nesimba uye uchaona kuti zvichakufambira zvakanaka.